Isiphuzo Bottle Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Isiphuzo Bottle Factory
Ibhodlela lengilazi lekomishi lengilazi ngotshani
Siphakela isampula yamahhala ngenkomba yamakhasimende, ngolwazi lwethu lokukhiqiza olunothile, imikhiqizo esezingeni eliphakeme nezixazululo, kanye nensizakalo ephelele emva kokuthengisa, i-jum izuze idumela elihle futhi isibe ngelinye lebhizinisi elidumile elikhethekile ekukhiqizeni uchungechunge. setha ubudlelwano bebhizinisi nawe bese uphishekela ukuhlomulisana. Sinciphise izindleko zokucubungula, izindleko ziyafaneleka ngokwengeziwe, sathola ukuxhaswa nokuqinisekiswa kwamakhasimende amasha namadala. Umqondo wethu ukusiza amakhasimende ngokunikela ngensizakalo yethu eqotho kakhulu, nomkhiqizo ofanele.
Swing top lid isiphuzo juice juice ibhodlela
Isiphuzo ingilazi ibhodlela ngotshani
Sinciphise izindleko zokucubungula, izindleko ziyafaneleka ngokwengeziwe, sathola ukuxhaswa nokuqinisekiswa kwamakhasimende amasha namadala. Umqondo wethu ukusiza amakhasimende ngokunikela ngensizakalo yethu eqotho kakhulu, nomkhiqizo ofanele. Ngobuchwepheshe obuyisisekelo, sungula futhi ukhiqize izimpahla ezisezingeni eliphakeme ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zemakethe. Ngalo mqondo, sizoqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo enamanani aphakeme kakhulu futhi sithuthukise ngokuqhubekayo izixazululo, futhi sizonikeza amakhasimende izixazululo nezinsizakalo ezihamba phambili! Sineqembu eliphakeme lonjiniyela ezimbonini kanye neqembu elisebenza kahle ocwaningweni. Ngaphezu, sinemigqa yokukhiqiza engaphezu kwengu-26 ku-workshop, ngakho-ke, singahlangabezana nemibuzo ehlukene evela kumakhasimende ahlukene. Uyemukelwa ukuhlola imininingwane eminingi kuzixazululo zethu futhi uxhumane nathi.
Ibhodlela lengilazi lejusi ngotshani
Ukuphathwa Kwaphezulu: I-Decal ne-logo Yesiphuzo Sivame ukunamathela kumqondo othi "Quality First first, Prestige Supreme". Sizibophezele ngokugcwele ekunikezeni abathengi bethu izixazululo zekhwalithi ephezulu ezinokuncintisana, ukulethwa okusheshayo kanye nezinsizakalo zezazi zamakhasimende. Imikhiqizo yethu inculde ingilazi yokuphuza isiphuzo, zonke izinhlobo zezimbiza zengilazi, ibhodlela lewayini, isitsha sengilazi, njll. Ngaphezu kwalokho, ukugcwaliseka kwamakhasimende ukuphishekela kwethu okuphakade. Sineqembu eliphakeme lonjiniyela ezimbonini kanye neqembu elisebenza kahle ocwaningweni. Ngaphezu, sinemigqa yokukhiqiza engaphezu kwengu-26 ku-workshop, ngakho-ke, singahlangabezana nemibuzo ehlukene evela kumakhasimende ahlukene. Uyemukelwa ukuhlola imininingwane eminingi kuzixazululo zethu futhi uxhumane nathi.
Ibhodlela lomoyaIbhodlela lewayiniIbhodlela likabhiya Ingilazi yeglasi nesiphuzo sokuphuza ˴ ingilazi yokuhambisa ingilazi jar Imbiza ye-Mason ingumkhiqizo wethu odumile. Yonke imikhiqizo ingadlula ukuhlolwa kwesitifiketi se-FDA, LFGB ne-DGCCRF. Okuhlaza, ukuvikelwa kwemvelo nempilo enempilo yabantu bekuhlala kuyinkomba yentuthuko yethu. Usizo lwabenza imisenenzi design ithimba babekwazi ukuhlangabezana nemfuneko ukuphrinta, ukupakisha, umkhiqizo design. Umgomo wethu ngukuthi: ukusebenza kwesiteshi esisodwa, ukuhlangabezana nesidingo sakho, ukunikela ngezixazululo nokufeza i-win-win.
Ukuphuza ibhodlela lengilazi ngotshani
I-JUMP yinkampani yeqembu enesipiliyoni seminyaka engama-20 egxile ekukhiqizeni okuhlukahlukene okuphakathi nasebangeni eliphakeme lokusetshenziswa kwansuku zonke kwengilazi nebhodlela lengilazi. Kutholakala esifundazweni sabavakashi abasogwini - iShanDong, njengenhloko esempumalanga yeNew Eurasian Continental Bridge, inetheku elikhulu lamazwe omhlaba jikelele eChina- QingDao Port, iJUMP inendawo eyingqayizivele ngokwendawo, okwadala izimo ezinhle zemvelo zebhizinisi lamazwe omhlaba.
Isiphuzo sokuphuza ingilazi ibhodlela ngotshani
isiphuzo ibhodlela nge isikulufa cap
Ilogo: Ikholomu Lekhasimende Elamukelekayo: Ukuphathwa kobuso obucacile noma obenziwe ngokwezifiso: Ukuphrinta kwesikrini, ukosa, ukuphrinta, is sandblasting, ukudweba, ukuphrinta nokufaka umbala umbala, njll. Ukusetshenziswa Kwemboni: Isiphuzo, izithelo, ijusi, amanzi, ubisi njll Izinto Eziyisisekelo: Isampula ye-Glass: I-OEM / ODM enikeziwe: Umbala we-Cap owamukelekile: Umbala Wokwakheka Ngokwezifiso: Isitifiketi Esiphathekayo, esiyindilinga noma esenziwe ngokwezifiso: Ukupakisha kwe-FDA / 26863-1 TEST / ISO / SGS Ukupakisha: Pallet noma ibhokisi Lendawo Yomsuka: Shandong, China Isiqinisekiso sekhwalithi: Automated ukuhlolwa ukuqinisekisa ikhwalithi yokukhiqiza ikhwalithi ngama-pcs ayizigidi ezingama-800 ngonyaka Isikhathi sokulethwa kungakapheli izinsuku eziyi-7 uma kunomkhiqizo esitolo, uma kunesidingo kwesinye ukulethwa kungakapheli inyanga eyodwa noma ukuxoxisana
Ibhodlela lesiphuzo sebhodlela elidumile
Sineqembu eliphakeme lonjiniyela ezimbonini kanye neqembu elisebenza kahle ocwaningweni. Ngaphezu, sinemigqa yokukhiqiza engaphezu kwengu-26 ku-workshop, ngakho-ke, singahlangabezana nemibuzo ehlukene evela kumakhasimende ahlukene. Uyemukelwa ukuhlola imininingwane eminingi kuzixazululo zethu futhi uxhumane nathi. Siphakela isampula yamahhala ngenkomba yamakhasimende, ngolwazi lwethu lokukhiqiza olunothile, imikhiqizo esezingeni eliphakeme nezixazululo, kanye nensizakalo ephelele emva kokuthengisa, i-jum izuze idumela elihle futhi isibe ngelinye lebhizinisi elidumile elikhethekile ekukhiqizeni uchungechunge. setha ubudlelwano bebhizinisi nawe bese uphishekela ukuhlomulisana.
Isitolo esidayisa yonke impahla ingilazi jucie ingilazi ibhodlela
Ngobuchwepheshe obuyisisekelo, sungula futhi ukhiqize izimpahla ezisezingeni eliphakeme ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zemakethe. Ngalo mqondo, sizoqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo enamanani aphakeme kakhulu futhi sithuthukise ngokuqhubekayo izixazululo, futhi sizonikeza amakhasimende izixazululo nezinsizakalo ezihamba phambili! Sineqembu eliphakeme lonjiniyela ezimbonini kanye neqembu elisebenza kahle ocwaningweni. Ngaphezu, sinemigqa yokukhiqiza engaphezu kwengu-26 ku-workshop, ngakho-ke, singahlangabezana nemibuzo ehlukene evela kumakhasimende ahlukene. Uyemukelwa ukuhlola imininingwane eminingi kuzixazululo zethu futhi uxhumane nathi.
I-Olive Oil And Vinegar Glass Cruet, Isikwele Ibhotela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil Bottle, 250ml Olive Oil Bottle, Ibhodlela Lamafutha Omnqumo, Imbiza Yokugcina Amafutha Olive,